Fomba fampiasana wifi Broadcom amin'ny Fedora ary openSUSE | Avy amin'ny Linux
Zironid | | GNU / Linux, Tutorials / Manuals / Tips
Roa andro izay izay no nametrahako openSUSE ary ny fanontaniana dia:
Ahoana no fomba anaovako ny Wifi?
Amin'ireo disko rehetra hitako ny wifi dia manome ahy olana (afa-tsy ny Ubuntu sy ny Mint), noho izany dia nieritreritra aho fa hametraka ny vahaolana hitako. Fedora y openSUSE.
Ny sisa ataonao dia apetaho ao amin'ny terminal ity baiko manaraka ity:
sudo /usr/sbin/install_bcm43xx_firmware (ity dia mametraka ny firmware)
(Fanamarihana: Tsy haiko raha mandeha amin'ny disto hafa izany)
Ho an'i Fedora dia somary sarotra kokoa io:
Ary tokony handeha ny wifi.
Manantena aho fa ilaina izany, arahaba.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Fomba fampiasana wifi Broadcom amin'ny Fedora sy openSUSE
Mahaliana momba ny script Openuse ho an'ny b43. Tsy haiko raha manana izany fitaovana izany ianao fa ny tompona fantsom-pifandraisana dia tena manao tsara lavitra tokoa, raha ny tena izy, tsy fantatro raha nahatsikaritra ianao fa io no heveriko fa arosonao ho an'ny Fedora.
Ny broadcom-wl ho an'ny openuse dia ao anaty packman, manomboka amin'ny openuse 11.2 ka hatrany amin'ny tumbleweed ary na dia ho an'ireo voan-javatra openuse aza.
Toy izany koa, misy tahiry maro hafa an'ny antoko fahatelo izay manana izany koa, saingy mamporisika ireo avy amin'ny packman aho. Io repo io dia azo ampiana avy amin'ny YaST na amin'ny tsindrio 1 fotsiny izay eo amin'ny ilany ankavanana ambony amin'ny tranonkala mifandray.
Eto aho mamela torolàlana fanampiny ho an'ny finday fanampiny.
Ary koa, raha mila mampiasa fitaovana tsy misy tariby hafa ianao toa ny adaptatera USB amin'ny PC desktop, ny fonosana kernel-firmware dia mirakitra izay rehetra ilainao.
Ny marina dia ny mpamily fananana irery no nahafahako nampandeha azy, efa nanandrana tao amin'ny Debian, Fedora, Arch ankoatry ny hafa aho ary io irery no vitako nanao asa.
Raha ny marina, hoy i Krel, miaraka amin'ny fonosana fonosana Packman, apetraho fotsiny ilay fonosana "broadcom-wl". Avy eo hamerenana ny masinina, ary milamina ny zava-drehetra. Mampiasa Wireless broadcom aho ary nampiasa azy io tao amin'ny OpenSUSE nandritra ny 2 taona tsy nisy olana.
Ny fomba miharihary ho an'ny Fedora dia mitovy amin'ny zavatra tokony nataoko tao Mandriva 2011, nanala ireo didy roa farany.
Ao amin'ny Fedora, raha manana ny trano fonenana rpm-fusion voalamina (Toy ny 99% olona mety maty) izy ireo dia mila mametraka ilay fonosana kmod-wl fotsiny. 😉
Tsara ny tolakandro, manana olana amin'ity fomba ity aho, napetraka tsara daholo ny zava-drehetra, fa rehefa averiko indray dia tsy manana intsony aho, afaka mampiasa ny tariby fotsiny aho ary vaovao amin'ny Linux aho.
Sary placeholder Victor Flores dia hoy izy:
amin'ny vahaolana rehetra hitako dia io irery no nanampy ahy ... misaotra betsaka
Valiny tamin'i Victor Flores
Ogalean dia hoy izy:
misaotra betsaka .. fandraisana anjara tsara
Mamaly an'i Ogaleano